Indlela yokubopha ikhonkethi yombhobho, iklasi yeklasi. Umbhoxo ogqithisiweyo wembhoxo, isithombe, ividiyo
Izinto ezindala ngamanye amaxesha zifumana ubomi obini kwaye zidlale ngemibala emitsha. Ukuba unemfuneko engadingekile akufanele uwalahle. Jonga ngokukhawuleza, mhlawumbi, baya kuphuma umthamo ococekileyo. Siya kukunika ingqalelo kwiklasi yeklasi ngesicwangciso sokwenza umbhoxo ovela kwiidragi ngezandla zakho. Akayikubhenela kuphela umgangatho endlwini, kodwa iya kuba isipho esikhulu kubahlobo okanye isixhobo sokuqeqesha umntwana wakho.
Izinto ezindala ezixutywe (i-pantyhose, i-t-shirt, i-T-shirt)
Inombolo yesi-hook yesi-Crochet
Izikrini ezinkulu, imitha, inaliti, umshini wokuthunga, iipende phezu kwendwangu, ibhulashi yobugcisa
Iimpahla ezidityanisiweyo ze-denim (yokuhlobisa).
Ubungakanani bomkhiqizo: 30x56 cm, ukuxinisa ubunzima: i-1cm yezinga elilodwa = 0.8 loops
Indlela yokudibanisa umbhoxo kwi-crochet crochet-inyathelo ngomyalelo wesinyathelo
Ukulungiswa kwezinto eziphathekayo kwi-crochet crochet:
Umsebenzi wasetyenziselwa: iibheki ezimbini zabantwana (iminyaka engama-2 ubudala), ibhulukwe lezemidlalo (ubukhulu obungama-40).
Qaphela: ngokubamba lo mbhoxo awukwazi ukubala ngokuchanekileyo isixa "sencoko", kuba iifayili zenziwe ngamacwecwe amacwecwe obuninzi obuninzi kunye nobunzima.
Siyinqumle into ebonakalayo kwiidbhoni zobubanzi ezahlukeneyo. Kwimeko yethu, ijezi eqinile - 0,5 cm, elastic - 0,8 - 1 cm.
Ukususela kwindlela olungiselela ngayo intambo iya kuxhomekeka kumgangatho wegubhu ezayo. Ukuba intambo ilukhuni - umbhoxo uphenduka obunzima, othobekileyo.
Iphulo: Ukuze wenze intambo iqhubeke, nqunqa impahla ngokuvuthayo, njengoko kuboniswe kwisithombe. Xa ugxininisa kwi-tangle, zama ukuphazamisa intambo kangangoko kunokwenzeka - oku kuya kwenza ukuba kube ngokulinganayo.
Ukuba uyazi izinto ezisisiseko zekhonkethi, ngoko unokukwazi ukujamelana nomsebenzi ngokulula, kwaye awufuneki nesikimu. Sifayela ikhonkco ye-38 loops ye-air kunye ne-56 cm e-columns eneentambo ezilinye. Kwinkqubo yokusebenza sitshintsha umlinganiselo wemibala.
Iphulo: xa ushintsha umbala, iiphelo zomtya zilungele ukugoba ngesandla ngenaliti kunye nentambo - ngoko kwimveliso eqhotyoshelweyo akuyi kuba namachule okanye iinkunzi.
Ukusuka kwi-denim sasiqhawula imivalo emine-ilingana ubude emacaleni ombhoxo oboshwe - kunye nobubanzi malunga no-5 ukuya ku-6 cm. Senza intsimbi ye-0.5 cm ngentsimbi (jonga isithombe) kwaye siwutyule umbhoxo wethu ojikelezayo kwi-perimeter.
Kwakhona, sinqumle ama-denim angama-denim (ubukhulu obungabonakaliyo), vula umgca wensimbi uze uboncele umrhumo ongekho kwi-surface yemveliso.
Ngoku songeza yonke into yokukrazula ngomshini wokuthunga.
Emva koko, ngoncedo lwepeyinti kwisithambathiso, sithatha kwizinto zee jeans naluphi na izicwangciso. Ungasebenzisa umzekelo.
Ividiyo. Ukuhlobisa umbhoxo.
Umbhoxo wethu ulungele. Nanku into enje yangaphambili yavela.
Njengoko ubona, nokuba umqali unokwazi ukujamelana nekhonto ngokulula.
I-crochet enhle kunye nobuhla
Indlela yokudibanisa ukudibana kunye neenaliti zokudibanisa?
I-Crochet cap kunye neenkalo zabasetyhini kunye namantombazana
Sadibanisa i-crochet esanda kuzalwa - iifoto kunye nemifanekiso
Iikhabhi ezinomsila nge-icing
Isaladi kunye nesaladi ye-roketi kunye ne-Mozzarella ushizi
Amanyathelo olwalamano lwentsapho
Ukuxilisa okungaqhelekanga kunye nokuxhamla kunye neentambo ze-bamboo
Ungasusa njani amabala etiyi kwiingubo?
I-Soufflé kunye nekakhukhunathi kunye ne-lime yindlela elula yokufumana iigourmets
I-saladi elula nge-apple ne-cheese mesh
Iintsuku zokuqala zobomi obusana
Iimpawu ezizalwe ngonyaka wenkomo
Impawu zokuqala eziza kuqala ukuzalwa
Into engenakudliwa ngabasetyhini abakhulelweyo